आज नेपालको दोस्रो एकदिवसीय खेल, कस्तो आउँला नतिजा ? – Everest Dainik – News from Nepal
आज नेपालको दोस्रो एकदिवसीय खेल, कस्तो आउँला नतिजा ?
काठमाडौं, साउन १८ । आज नेपालले नेदरल्याण्डविरुद्ध दोस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल खेल्दै छ । खेल नेपाली समयअनुसार २ः४५ बजे नेदरल्याण्डको भिआरए मैदानमा हुनेछ । पहिलो खेलमा सुखद परिणाम निकाल्न नसकेको नेपालको प्रदर्शन आज कस्तो रहला ? धेरैलाई चाँसो छ ।
बुधबार भएको पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपाललाई नेदरल्यान्ड्सले ५५ रनले पराजित गरेको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सलाई नेपालले १ सय ८९ रनमै अलआउट गरेको थियो। जवाफमा ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले ५१ र अनिलकुमार साहले २१ रन जोडेर पहिलो विकेटका लागि ५८ रनको साझेदारी गरेका थिए। तर ब्याटिङमा जमेका रिप्पोन बलिङमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन बन्दा नेपालको ब्याटिङ लाइन खराब रह्यो ।
पहिलो खेलले दुवै टिमको ब्याटिङमा समस्या देखिएको छ। बलिङमा दुवै टिमले राम्रो प्रदर्शन गरेको अवस्थामा दोस्रो खेलमा ब्याटिङकै भिडन्त हुने देखिएको छ। खास गरी नेपालको मध्यपंक्तिले सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ।
घाइते भएका मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान शरद भेशवाकरले दोस्रो खेल गुमाउदैछन्। उनको स्थान सायद रोहितकुमार पौडेलले लिन सक्छन् । आज हुने दोस्रो खेलमा नेपालले जित निकाल्ने लक्ष्य बनाएको छ। कप्तान पारस खड्का आजको खेलबारे भन्छन्,‘ब्याटिङमा थेरै सम्हालिएको भए पहिलो खेल सजिलै जित्न सक्थ्यौं। तर त्यस्तो हुन सकेन। दोस्रो खेल राम्रो ब्याटिङ गर्नेमा आशावादी छु।’
पारस खड्का (कप्तान), अनिलकुमार साह, वसन्त रेग्मी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, ललित भण्डारी, ललित राजवंशी, आरिफ शेख, रोहितकुमार पौडेल, सन्दीप लामिछाने, शक्ति गौचन, शरद भेषवाकर, सोमपाल कामी, सुवास खकुरेल
पिटर सिलार (कप्तान), वेस्ले बारेसी, बास डे लिडी, बेन कुपर, स्कट इडवार्ड्स, फ्रेड क्लासन, हिडे ओभरजिक स्टेफिन माइबुर्घ, पाउल भान मीकेरेन, म्याक्स ओडोड, हिडी ओभरजिक्स, मिचेल रिप्पोन, सेन स्टनर, ड्यानियल टेर ब्राक
ट्याग्स: Nepal vs Nedralands, nepali cricket team